uMorris uphendula isicelo sakapteni
Kuthathe umyalezo olula ophuma kukapteni, uFaf du Plessis, ukugqugquzela u-Chris Morris ukuthi aphose kahle kwi-spell sakhe ukukhipha umsila we-England kanye nokubeka amaStandard Bank Proteas ngaphambili ngosuku lwesibili lwe-Test yesibili eTrent Bridge ngoMgqibelo. uMorris uqale kabi kuma-overs amathathu lapha ephisane ngama-runs angu-20, kodwa wabuya kahle nge-spell esivuthayo (3/18 in 5.5 overs) ukuqeda eno-3/38.
“Ngokwami, uyabambeka njengomuntu ophosayo uma kukhona i-swing nokuthi yonke into eyenzeka kwi-pitch ikwenza ugxile ekubekeni ibhola khona kunokuthi uphose,” esho ekhuluma ngamaphutha awenzile nge-spell sakhe sokuqala. “Umlayezo ubucacile ophume ku-Faf, ibanolaka futhi uphose ngokushesha. Kimina lokho kususe ukuziphikisa ngalokhu obekumele ngikwenze futhi ngicabanga ukuthi kusebenzile namhlanje. Ngigijimile futhi ngazama ukuphosa ngokushesha.”
“uFaf ugcina izinto zilula,” ekhuluma ngokuba ukapteni. “Ukhuluma kahle nabantu abaseqenjini kodwa ikakhulukazi nabantu abaphosayo kanye nethimba eliphosayo, ngicabanga ukuthi kuyavela (kwimiphumela).”
Abaphosa ngokushesha bazongconywa kakhulu ngesimo se-pitch, kodwa uMorris ubize igama le-left-arm spinner, uKeshav Maharaj, ohlaselile wanika amaProteas i-wicket ebalulekile ka-Ben Stokes ophume ngeqanda. Ukuqeda eno-3/21 ukunezezela okuhle futhi kubeka umqhudelwano omuhle kwi-innings yesine njengoba isimo sicekelela phansi.
“uKeshav usithathele ama-wicket oncomekayo namhlanje,” kusho uMorris. “Le ka-Johnny Bairstow ibe ibhola elihle kunawo wonke engiwabonile, ngaphandle kwaleli lika-Liam Dawson elakhipha u-Hashim Amla ngesonto elidlulile. uKeshav usenzela umsebenzi oncomekayo, siyazi ukuthi sizotholani evela kuyena, futhi kwi-wicket ejikayo, ungucwepheshe ekushintsheni uhambo kanye nendlela. Uyindoda eqotho esinayo eqenjini lethu kanye nasekuphoseni.”
Kusasele isikhathi esiningi emdlalweni, okunika abashayayo isikhathi sokubeka umphumela abangawuvikela. uMorris uyavuma ukuthi akazi ukuthi umphumela ongabanqobisa yimuphi, ukucikeleleka kwesimo kudlala indima engqondweni.
“Anginacebo,” ekhuluma ngomphumela wokunqoba. “Iyadlala i-wicket; inempilo phakathi, kunokunyakaza kwe-seam futhi isimo sezulu senza kube sengathi u-200 wanele ngosuku olulungile. Sizozama ukushaya kahle futhi noma isiphi isinqumo esenziwa u-Faf acabanga ukuthi sanele ukuthi sisivikele futhi i-England ishaye.”
u-Dean Elgar (38 not out) no-Hashim Amla (23 not out) bazoqhubeka ukwakha ukuba ngaphambili njengoba bengaphambili ngama-runs angu-205 besalelwe ama-wicket ayisishagalolunye uma umdlalo ugqubeka ngo-11h00 e-England ngeSonto.
Uthi uDu Plessis amaProteas ‘azovivinywa isimilo’ uMoeen Ali uthatha abayisithupha ukunqobisa i-England Die Standard Bank Proteas bly optimisties dat hulle steeds kan terugveg in die eerste Toets teen Engeland op Lord's. Engeland is stewig in die saal met 'n voorsprong van 216 met nege paaltjies staande na drie dae se spel. Azikho izizaba zama-no-balls - uPhilander uRoot ubungaza usuku lakhe lokuqala njengokapteni ngokuthola ikhulu ukubeka i-England ngaphambili uPhilander ubuyela kwinkundla eyamulethela ukujabula uElgar onesibindi indoda yomsebenzi – uDomingo uDu Plessis uzophuthelwa iTest yokuqala ngenxa yomndeni I-Series iqala kusasa - uElgar Ukubekezela kumsebenzelile uKuhn iCSA ibala uKuhn noPhehlukwayo kwiqembu lama-Test